Samsung Galaxy S11: naqshadeeda ayaa la kashifay, iPhone 11 Pro? | Androidsis
Isaga wax ka yar ayaa u hadhay Samsung Galaxy S11 ugu dambeyntii arag iftiinka. Shaqada soo socota ee la filayo ee shirkadda Kuuriya ayaa lagu soo bandhigi karaa iyada oo loo marayo qaabka Mobile World Congres 2020 kaas oo siin doona qorigiisa gaarka ah ee bilowga ah inta lagu jiro usbuuca ugu dambeeya Febraayo. Waxaan horay u aragnay faahfaahin qaar, sida astaamaha farsamo ee suurtogalka ah. Haatan waa waqtigii laga hadli lahaa qaabeyntiisa.
Si tan loo sameeyo, waxaan ku tiirsanaan karnaa taxaneyaal taxane ah oo la daadiyay oo muujinaya sida uu u ekaan doono xubinta cusub ee qoyska Galaxy S ee shirkadda Aasiya. Iyo haa, naqshadeynta Samsung Galaxy S11 Plus waxay aad ugu egtahay tan uu ku tartamayo. Taasina ma wanaagsana.
Tani waxay noqon doontaa naqshadda Samsung Galaxy S11 Plus
Marka hore, waxaad dhahdaa waxaa nagu soo food leh xanta ama daadinta, marka waa inaad ku qaadataa macluumaadkan toobiyeyaal. Ama maya. In kabadan wax walbo maxaa yeelay halka laga soo daadiyay waxbadan maahan mana ahan wax kayar @Onleaks, khabiir baxsiga in uusan inta badan ku khaldamin wax ka mid ah saadaashiisa iyo daadinta. Kaalay, waxay u badan tahay inaynu ka horrayno isaga naqshad qeexan oo Samsung Galaxy S11 Plus ah.
Waxaad dhahdaa terminalku wuxuu yeelan doonaa cabir dhan 166,9 x 76 x 8,8 mm, marka lagu daro dekedda USB-ga iyo shaashad noqon doonta qofka ugu weyn ee taleefanka in ku bixiya soosaarka dhagaha. Haa, Samsung waxay ka tagaysaa cunsurkan dhinac, iyadoo raaceysa raadka Apple. Mana aha waxa kaliya ee ay isku mid yihiin ...
In ka badan wax kasta maxaa yeelay, waa xaqiiqo muuqata in dhabarka uu muuqaal eg u eg yahay. Waxaan ka hadlaynaa nidaam shan kamarad ah, hubaal saddex muraayadaha caadiga ah iyo laba dareemayaal (mid ToF ah iyo mid si toos ah diiradda loogu saarayo) Waxaa loo raad raacay kii iPhone 11 Pro ama Huawei Mate 30 Pro.
Naqshad sameynta, waxaa la filayaa in Shaashadda Samsung Galaxy S11 Plus Waxay ka kooban tahay guddi dhan 6.9-inji oo wata tikniyoolajiyad Dynamic AMOLED ah, sidaa darteed waxaan arki karnaa in ugu yaraan hore loo adeegsaday si wanaagsan. Waa inaan sugno si aan u xaqiijino xogtan, laakiin waxay umuuqataa in calanka soo socda ee shirkaddu uu noqon doono mid ka mid ah tartamayaasha waaweyn ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Naqshadda Samsung Galaxy S11 Plus waa la sifeeyey ... Oo waxba ma jecli doontid
Mmmm iyo cinwaanka falopa? Ckickbaitero oo u maleynaya dibi dhal? Sidee tabar daran.